Download Download s
> Resource > Hard Drive > Music Transfer ka External Hard Drive in iPod
Ma suurogalbaa in nuqul music ka drive dibadda adag gal iPod ah? Waxaan leeyahay drive dibadda la muusig badan oo aan la tirtiro off aan laptop si lacag la'aan ah ilaa iyo hadda meel aan doonayo in aan ku rid gal cusub iPod. Ma jirto meel ku filan on my drive laptop adag tahay in la dhigay music soo galeen laptop ka dib darteed ee ma jirtaa hab si ay u gudbiyaan ka drive ay adag tahay in iPod ah? Mahadsanid.
Jawaabtu waa HAA. Ma aha in aad si hagaagsan iPod la Lugood, taas oo kuu oggolaanaysa in aad lumiso oo dhan songs jir iPod ah. Halkii, waxaad ka drive dibadda adag wareejin karaan music in iPod in Dufcaddii Oo aad dhawrtid songs jir ku yaal waqti isku mid ah. Si aad oga, aad u baahan tahay si aad u hesho qalab-saddexaad caawimaad ah. Wondershare TunesGo (Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) waa ikhtiyaar fiican. In this article, waxaana idin ​​tusin doonaa inaad sidatan u samaysid.
Fiiro gaar ah: version Mac magacaabay Wondershare TunesGo (Mac) taageertaa iPod xiriiri 4 iyo 5 xiriiri macruufka iPod socda 5, macruufka 6, macruufka 7, 8 macruufka iyo macruufka 9. Iyadoo version Windows, waxaad nuqul ka kartaa music ka drive dibadda adag tahay in dheeraad ah daydo iPod, ku odhan, iPod shaandheeyn, nano iPod, classic iPod iyo iPod taabto. Halkan yimaado info badan oo ku saabsan taageeray daydo iPod .
Sida loo drive ka adag dibadda si iPod wareejiyo music
Windows iyo version Mac Labada si fiican u shaqeeyaan. In this article, waxaan doonayaa inaan diirada saaro version Windows ah. Users Mac raaci karo tallaabooyinka la mid ah si aad u hesho wax lagu qabto.
Tallaabada 1. Connect iPod iyo drive dibadda adag tahay in kombuutarka
Si aad u bilaabaan oo leh, ordo TunesGo ka dib markii ay ku rakibidda kombuutarka. Connect ah iPod iyo drive dibadda adag tahay in PC la cable ee USB digital. Marka iPod la ogaado, barnaamijkan soo celin doonaa suuqa kala muhiimsan ee ku saabsan oo iPod ayaa lagu muujiyay.
Tallaabada 2. Transfer music ka drive ay adag tahay in iPod
Dhinaca bidix waa iPod ee geed buugga. Guji "Media" si ay u muujiyaan suuqa kala music ah. Guji "Music" marka uu furmo suuqa music aan la muujiyey. Dhinaca bidix waa iPod ee geed buugga. Guji "Media" si ay u muujiyaan suuqa kala music ah. Guji "Music" marka uu furmo suuqa music aan la muujiyey.
Markii barnaamijkan ogaadaa in music ma aha in iPod qaab filaayo, waxay kaa caawin doontaa in aad u badalo.
Dabcan, waxa kale oo aad u guuri kartaa playlists ka iPod in drive dibadda adag. Kaalay dib ugu column ka tegey oo guji "playlist". Dooro playlists aad u jeclaystay. Guji "Dhoofinta in". Dul drive dibadda adag oo ka guurto playlists waa in.
Fiiro gaar ah: Marka la joogo, version Mac uusan u dhaqaaqin taageeraan playlists ka drive dibadda adag tahay in iPod sida version Windows ma.
Download TunesGo in aad nuqulka music ka drive adag dibadda si iPod.
Ka iPod Bedelka Music inay External Hard Drive